Zvigadzirwa zvemucheka zvemukati zvitatu zvakakosha kukura kwekuraira - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Zvigadzirwa zvemucheka zvemukati zvitatu zvakakosha kukura kwekuraira
Seimwe yeaindasitiri emachira emachira, indasitiri yemachira epamba ndeye tsika yechinyakare yekurarama, indasitiri yekugadzira inosanganisa sainzi uye hunyanzvi, uye indasitiri yemafashoni inogadzira hupenyu huri nani. Inotora basa rakakosha kukurudzira kukura kwezvakawanda zvinodiwa, kukurudzira basa uye kuvaka zvakabatana. Munguva yose yekuvandudzwa kwemaindasitiri emachira epamba munguva yakapfuura 20 makore, machira epamba akagadzika zvishoma nezvishoma akananga kune kusiana, kungwara uye conceptualization, kuratidza hunyanzvi hwekugadzira uye kufambira mberi kwehunyanzvi kwese kupi.
Mucheka wemubhedha, chigadzirwa chizere nezvinhu zvakanaka mumaziso, kubva pane yakajairika polyester / machira, yakachena machira ekudhinda machira zvishoma nezvishoma kune nyowani inoshanda fenicha uye yakakosha kugadzirwa kwezvinhu zvemachira akakwirira-ekupedzisira, kunge bamboo pulp fiber, hemp, polylactic acid fiber uye mukaka mapuroteni fiber uye soya mapuroteni fiber uye humwe hutano hwepanyama, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, biodegradable, zvinhu zvinogadziriswazve zvinowedzera kushandiswa kuzvigadzirwa zvemachira zvemumba. Machira anogadzikana uye ane hutano anosanganisira firakisi, tencel TM, graphene yakagadziridzwa fiber uye taiji ibwe fiber, anoshanda machira akadai antibacterial uye anti-mite machira, yakakwirira-rutsigiro uye yakakwira-density yadhi-yedhi jacquard machira uye jira-dehwe MATS rakagadzirwa kuti riwirirane nekuvandudza kwevatengi.
Mu mucheka art mhando chigadzirwa kuremekedza, chigadzirwa chakadai sejira remicheka yeketeni, sofa yakawanda diversform, kubva pakuremekedza kwakadai sekugadzirwa kwemuitiro wepeti, machira kutsvaga uye kusimudzira anotanga kukura kune sainzi uye tekinoroji vogue gwara. Jacquard, mudhindwa, embroidery, embossing, bronzing, kufudza uye dzimwe nzira dzekuita kuti chigadzirwa chiwedzere hunyanzvi; Tsika yechinyakare inosanganisa tekinoroji yazvino uye aesthetics kuratidza iyo tsika deposits yezvishongedzo zvemachira epamba; Zuva, murazvo retardant, nyore kutarisira mushure mekupedza tekinoroji application yakawanda yakakura uye inochinjika; Panguva imwe, kukwidziridzwa uye kufararira kwemachira akapedzwa kunoita kuti shanduko yezvigadzirwa ishandiswe kubva kune yakasvibira zvakanyanya kusvika kune yakanyanya nyore, uye ita kuti kushandiswa kuve kwakaringana.
Panyaya yezvigadzirwa zvetauro, technology thauro yakafamba zvishoma nezvishoma kubva mukucheka, kucheka mvere, isina-kusveta yarn uye humwe hunyanzvi matekiniki ekuti utore toni, huchi huchi, isina kusimba tekinoroji uye isina-yakarukwa tekinoroji, izvo zvinoita kuti zvigadzirwa zviwedzere kuve nharaunda pamwe neyakagadzikana. Raw zvinhu zvinowanikwawo zvakasiyana, pamusoro peiyo huru yezvigadzirwa zvekotoni, superfine fiber, bamboo pulp fiber, hemp fiber, chitin fiber, lessel fiber uye mamwe manyowani nyowani maficha ari kuwedzera uye akawandisa.
Intelligent chigadzirwa kuvandudza
Nekusvika kwezera reInternet ruzivo, zvigadzirwa zvemachira epamba zvakare zvinopihwa zvishoma nezvishoma humwe hutema hwekuita. Yakawanda mwenje uye inogara kwenguva refu, madiki uye mashoma modulectacctel module, seye sensor module uye control module iyo inogona kuona kupisa, humidity, kuvhenekerwa, gasi rine muchetura uye machira emumba, inogona kuziva hunhu hunodzora hwekupisa, humidiunyorodza, kunaka kwemweya. Pamusoro pe, inokwanisawo kukwanisa kuchinja zvinoenderana nharaunda, zvavanoda uye vozvigadzirisa pachako tembiricha, humidity uye mhepo nyowani yezvakabatanidzwa wedunhu miniature zvigadzirwa zvakaiswa mumachira emumba, kusangana nevaraidzo, kutaurirana, hutano zvinodiwa. Semuyenzaniso, ma module ane basa rekutarisa nekuona kurova kwemoyo wemunhu, kufema, kudzvinyirira kweropa, electroencephalogram uye electrocardiogram yakaiswa mukatuni yekuchenjera yekutarisisa ruzivo rwekurara kwezuva nezuva uye kuziva hutano hwekutarisisa uye basa re alarm., inonyanya kukodzera kune varwere vakakosha, vanhu vakura vane kusagadzikana kwekusagadzikana uye vacheche.
Nekuvandudzwa nekusimudzirwa kwe iot ecology, machira emumba, sechiteshi chechisango chakabatana nevanhu, haigoni kungopa kugona kwakanaka mune ramangwana, asi zvakare uve mutakuri uye bhiriji yehupenyu huri nani. Iyo yekumberi yekushandisa tarisiro yeakanaka machira emachira haina magumo.
Chigadzirwa conceptualization kuvandudza
Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji pamwe nekuvandudzwa kwevatengi \_ 'kuchenjera, kuburitswa kwezvigadzirwa zvemachira epamba kunopa maitiro matsva ezvekuita conceptualization. Semuyenzaniso, kubvira jiangsu jinsun machira emuchina co., Ltd. isa mberi pfungwa ye "deep sleep" in 2015, yakaburitsa zvakatevedzana zvigadzirwa zvitsva zveiyo inodziya velvet yekurara kwazvo mukmui 2016. In 2017, muchando uye munguva yechando zvigadzirwa zvitsva zve "kungwara · deep sleep" uye chitubu uye zhizha zvitsva zvigadzirwa zve "masikirwo · deep sleep" dzakateedzana dzakaburitswa. Chigadzirwa chitsva "dhizaina uye unakirwe nehope huru" rakaburitswa mukati 2018 inonyatkurara kwazvoza ichitsvaga yekutsvaga nekuvandudza pfungwa ye "deep sleep". Izvo zvigadzirwa zvemicheka zvepamba zvakatangwa nebhizinesi mukati 2019 vari kukura zvishoma nezvishoma kusvika pazera rechidiki, kunyanya kutarisisa kune angangoita makuru mapoka evatengi mushure memazana ma1990 nema2000, uye chinzvimbo chinzvimbo chiri pachena.
Hutano hwemumba machira, kurara kwazvo, diki imba yekugadzira machira zvigadzirwa dhizaini inofanirwa kuzadzikiswa kuburikidza nesainzi uye tekinoroji uye kuenderera mberi kwekutsvaga nekusimudzira. saka, kusiyana-siyana, ungwaru uye conceptualization yezvigadzirwa zvemachira epamba kwete chete ine chinyorwa chakasimba cheThe Times, asi zvakare ADAPTS kune yesainzi uye tekinoroji kufambira mberi uye zvigadzirwa kugadzira munguva itsva.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota teerera kune "maitiro emangwana ehembe nyowani machira ekubatanidza tekinoroji uye yekuvandudza mafashoni", iyo yechisere nyaya 2019.
Tekinoroji yekuvandudza yeinoshanda fiber fiber
Chipfeko chakangwara chakagadzirwa nesimbi yesimbi